WINE 6.1 inovandudza rutsigiro rweMac M1s uye inodzokera kune yakajairwa budiriro | Linux Vakapindwa muropa
WINE 6.1 inodzokera kukuvandudza kweweekiki kuvandudza rutsigiro rweMac M1s
Kwekupedzisira january 14 yakavhurwa yazvino vhezheni yakagadzika yesoftware iyo inotibvumidza isu kumhanyisa Window maapplication pane mamwe mapuratifomu. Pakutanga, vatanhatu Vanoburitsa Vanokwikwidza vanga vaburitswa, mumwe pavhiki, zvichisiyana zvakajairika, kusimudzira kwevhiki mbiri ivo kwavanoshandira kwegore rese. Mushure meWINE v6.0, ikozvino yave nguva yekudzokera mukuvandudza, ngatitii zvakajairika, saka maawa mashoma apfuura ivo vaparura WAINI 6.1, inova yekutanga vhezheni yechikamu ichi uye iyo ichave iine anotsiva zvakare mumasvondo maviri.
WainiHQ inoshanda seizvi: ivo vanoburitsa yakagadzikana vhezheni, wobva waenderera mberi kutarisa kune inotevera uye kuburitsa yekuvandudza vhezheni vhiki mbiri dzese, senge WAINI 5.22. Ikozvino ndipo pavanotanga kutaura akawanda matsva maficha avanosanganisira, senge makumi matatu nenomwe akagadziriswa zvikanganiso uye ne 326 kuchinja kubvira 6.0. Sezvazvinowanzoitika kana budiriro iri bi-vhiki nevhiki, chirongwa chinotaura mashoma chete eaya shanduko seakakosha, mashanu kune ayo anowedzerwa yakajairwa nhamba yekugadzirisa. Unevo pazasi.
WINE 6.1 inosimbisa
Gadzira zvinyorwa zveArabic.
VKD1.2D vhezheni 3 inoshandiswa kune Direct3D 12.
Tsigiro yeRosetta memory dhizaini paMac M1.
Tsigiro yeThumb-2 modhi muARM.
Vashandisi vanofarira izvozvi vanogona kuisa WINE 6.1 kubva kune yayo kodhi kodhi, inowanikwa mukati izvi y iyi imwe link, kana kubva pamabhinari anogona kutorwa pasi kubva ku pano. Mune iyi link kubva kwatinga dhawunirodha mabhinari pane zvakare ruzivo rwekuwedzera iyo yepamutemo chirongwa repositi kuti ugamuchire izvi uye nezvimwe zvichavandudzwa mune ramangwana pavanongogadzirira masystem senge Ubuntu / Debian kana Fedora, asi kune zvekare mavhezheni e Android uye macOS.
Iyo inotevera yekuvandudza vhezheni ichave WINE 6.2 uye, kana pasina zvinoshamisa, izvo zvandinotarisira kufambisira mberi izvo zvisingaitike ndichiona kubata nguva kwavanoita muWineHQ, ichasvika muna Kukadzi 12. Pakati pezvauchasuma, chinhu chega chatinogona kukuvimbisa ndechekuti ichauya nemazana ediki ekuvandudza uye kugadzirisa sekugara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WINE 6.1 inodzokera kukuvandudza kweweekiki kuvandudza rutsigiro rweMac M1s
Miguel Tapia akadaro
Mhoroi, ini handikwanise kufunga kuti ndoisa sei waini 6.1 pane mac yakakwira sierra.
Kutenda uye zvakanaka zvese.
Pindura Miguel Tapia